Kuqhamuka Ingxabangxoza Kuxotshwa UKunonga Kuzakhiwo zeAnglican
Sunday, February 14, 2016 Local time: 11:53
lcele elikhokhelwa nguBishop Kunonga lithi lisemthethwandaba lapho elibikwa lizama ukuphikisa isinqumo esethulwayo.
WASHINGTON— Amapholisa emthethwandaba ngoLwesithathu axotshe uBishop Nolbert Kunonga webandla leAnglican emahofisini alinkonzo eHarare kulandela isinqumo somthethwandaba we Supreme Court kuviki edluleyo esokuthi uBishop Chad Gandiya okhokhela elinye icele lalinkonzo nguye umkhokheli walo oqotho olelungelo lokusebenzisa imphahla ye Anglican.
Amapholisa emthethwandaba abikwa ekhuphele phandle impahla zikaKunonga labanye abakade sebesebenzisa izakhiwo zalelibandla njalo alinda lindawo.
Icele elikhokhelwa nguBishop Gandiya lithi uKunonga uphinde wabuyela emahofisini la njalo abantu abehamba labo batshaye amapholisa abelindile.
IStudio 7 kayenelisanga ukukhuluma lecele elikhokhelwa nguBishop Kunonga ngaloludaba ngoba iziphathamandla zalo zisithi zisemethethwandaba, lapho ezibikwa zizama ukuphikisa isinqumo esethulwayo.
Ukuhlaziya loludaba, iStudio 7 uxoxe lo lomfundisi Useni Sibanda, isiphathamandla seZimbabwe Christian Alliance, eyayingumlamlankunzi kuloludaba.
USibanda utshele uSithandekile Mhlanga ukuthi kufanele uBishop Kunonga aziphumele kulezizakhiwo kulokuthi akhutshwe ngendlela engalasithunzi ngamapholisa emthethwandaba.
Ingxoxo LoMfundisi Useni Sibandai